ဂျင်းလေး ဆုံးသွားတာ တစ်နှစ်ပြည့် လို့ သတိရနေတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို – XB Media Myanmar
Myanmar Idol season3ရဲ့ ဒုတိယဆုရှင် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုဟာဆိုရင် သူမရဲ့ ချစ်စရာေ ကာ င်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ သူမရဲ့ သာယာချိုမြတဲ့ အသံလေးကြောင့် သူမကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသူလေးပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေးရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ချမ်းမြေ့မောင်ချို က သူချစ်ရတဲ့ ခွေးလေးကို သတိရနေတယ်လို့ ပြောထားတဲ့ အကြောင်း ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ချမ်းမြေ့မောင် ချို က အနုပညာအလုပ်တွေ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း သူမရဲ့ ပထမဆုံး သီချင်းခွေေ လး ထွက်ဖိုးကြိုးစားနေတာပါ။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို က သူmyanmar idol ပြိုင်ပွဲစဝင်တုန်းက သူချစ်ရတဲ့ ခွေးလေးဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးဖူးသလို သူ့ရဲ့ ခွေးလေးက သူသီချင်းတွေဆိုပြီး မအားမလပ်နိုင်ြ ဖစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ဒီနေ့လေးက တော့ သူ့ရဲ့ ခွေးလေးဆုံးတာ ၁နှစ်ပြည့်သွား တဲ့အတွက် သတိရကြောင်း ခုလိုပြောထားပါတယ်။
” တစ်နှစ်တောင်ပြည့်ပီ ဂျင်းလေးရေ ❤️အမြဲသတိရနေတယ် ပိစိလေးနဲ့လဲ မတည့်အတူနေပီး ဂရုစိုက်ပေးနေပါတယ် စိတ်လဲ မပူနဲ့ ငါ့သမီးလေးကို မြုပ်ထားတဲ့နေရာနားကဖြတ်သွားရင် အမြဲကြည့်မိတယ်…အဆင်ရောပြေရဲ့လား ? အမြဲတမ်းအိမ်ပြန်လာရင် ဝရံတာက နေ အမြဲေ ခါင်းေ လးထွက်ပီး စောင့်နေတတ်တဲ့သူလေး ပျော်နေရင် အိမ်ရှေ့နဲ့နောက်ကို ပတ်ပြေးေ နတတ်တဲ့သူလေး ခြင်တွေ့ရင် မနေနိုင်အောင် လိုက်ဖမ်းတတ်တဲ့သူလေးအဆင်မပြေလို့ ငိုနေပီဆိုရင် မျက်ရည်လေးတွေကိုသုတ်ပေးတတ်တဲ့သူလေး မွေးထဲက ကိုယ့်လက်ပေါ်မှာပဲ ကြီးခဲ့တဲ့သူလေး ဒေါသလဲအရမ်းကြီးသလို သဘောလဲအရမ်းကောင်းတဲ့ သူလေး အစားအ လွန် မက် အိပ်ရေးလံအလွန်မက် သူ့သခင်နဲ့အလွန်တူတဲ့ သူလေး ဘုရားရှိခိုးရင်ေ ဘးကနေေ စာင့်ပေးနေတတ်တဲ့သူ”
“ခလေးလေရေ အခုဘဝမှာပျော်နေရဲ့လား.. ဂျင်းသာရှိနေသေးရင် အခုအိမ်အသစ်ကြီးမှာ အကျယ်ကြီးပက်ပြေးလို့ရပီ ဝရံတာကနေလဲ ကြည့်နေလို့ရသေးတယ် ငါ့သမီးလေးက ပျင်းရင် လမ်းမကြီးကိုကြည့်တတ်တော့ အရင်အိမ်လေးကဆို သူ့မှာ လမ်းမ နဲ့ သစ်ပင်နဲ့ကိုပဲ ကြည့်နေ ရတာ အခုဆို ကားမျိုးစုံ ငါ့ သမီးလေးကြည့်လို့ရပီ.. ဒါပေမဲ့…. ငါ့ သမီးလေး မရှိတော့ ဘူး အမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်တဲ့ခလေးလေး… အခုဘဝမှာလဲ အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေပါစေ.. အမြဲသ တိ ရေ နပါတယ် ဂျင်းရေ…”ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။
အဆိုတော် ချမ်းမြေ့မောင်ချို က သူ့ရဲ့ ဆုံးသွားတဲ့ ခွေးလေးကို သတိရနေတဲ့အကြောင်း ပြောထားတာကို ပရိသတ်တွေ သိရလောက်ပြီထက်ပါတယ်။ ကြည့်ရူပေးကြတဲ့ မိုမိုလေး ပရိသတ် ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
Source;chan myae mg cho,Reference& Credit:momolay.com
ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး စမတ်ကျကျလှနေ တဲ့ မေပန်းချီ